Microsoft Access Weydiiso Password Markaad Fureyso Macluumaad Musuqmaasuq ah
Bogga ugu weyn Products DataNumen Access Repair Microsoft Access Weydiiso Password Markaad Fureyso Macluumaad Musuqmaasuq ah
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan Khaladka ay Microsoft Access weydiiso Password marka la furayo Macluumaad Musuqmaasuq ah
Markaad isticmaaleyso Microsoft Access si aad u furto khariban laakiin aan sir aheyn Soo gal feylka keydka xogta, waxay soo bixi doontaa wadahadal "Password loo baahan yahay" waxayna ku weydiin doontaa inaad gasho erayga sirta ah, sida tan:
Maaddaama feylka asalka ah AAN la wada xajin, lambarka sirta ah ee aad gasho, oo ay ku jiraan xarig madhan, wuxuu sababi doonaa qaladka soo socda (qalad 3031) oo wuu furi doonaa feylka:
Ma aha erey sir ah
Musuqmaasuqa faylka keydka xogta gelida awgood, Access wuxuu uqaadan doonaa feylka aan sirta aheyn mid laqariyay. Sidaa darteed, waxay ku weydiin doontaa lambar sir ah iskuna daydaa inaad ka tirtirto. Si kastaba ha noqotee, maaddaama faylka aan la isku qorin gabi ahaanba, habka qaadashada ayaa had iyo jeer ku guuldaraysanaya lambarka sirta ah.
Xalka kaliya ee dhibaatadan waa isticmaalka alaabtayada DataNumen Access Repair si loo hagaajiyo feylka MDB loona xaliyo qaladkan.
Muunad fayl MDB ah oo musuqmaasuq ah oo sababi doona qaladka. mydb_6.mdb
Faylka ayaa lagu hagaajiyay DataNumen Access Repair: mydb_6_fixed.mdb